September 2019 – Burmese Online News
အိမ့်ချစ်ကတော့ စိတ်သဘောထားဖြူစင်ပြီး အလှူအတန်းတွေမှာ စိတ်အားထက်သန်သူတစ်ယောက်ပါ။ လက်ရှိမှလည်း အလှူအတန်းတွေမှာ ဝါသနာပါတဲ့ အိမ့်ချစ်က ကလောနှီးဘုရားကြီးအား လုံးတော်ပြည့်ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူ လှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့သူရဲ့ လူမှုကွန်ရက်မှာ ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အလှူတွေအတွက် ရေးစက်ချအလှူကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နောင်လည်းခုလိုအလှူတွေ အမြဲလှူဒါန်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်ခွင့်ရအောင်လည်း အိမ့်ချစ်က ဆုတောင်းခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အိမ့်ချစ်ဟာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး စိတ်သဘောထားဖြူစင်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို ပိုင်ဆိုင်ရရှိထားသူတစ်ယောက်ပါ။ ဒါ့ကြောင့်လည်းအိမ့်ချစ်ဟာ”ကိုယ်တိုင်ရေးပုံတူ”၊”အချစ်ရေး”၊”အောင်မြင်မှုရဲ့နောက်ကွယ်”စသဖြင့်တေးစီးရီးအယ်ဘမ်တော်တော်များများကို ထွက်ရှိအောင်မြင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အိမ့်ချစ်ကတော့ ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်နဲ့ သီချင်းတွေကို ရေးစပ်ပြီး ကိုယ်တိုင်သီဆိုတတ်သူတစ်ယောက်ဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် အိမ့်ချစ်ဟာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ Quang Ninh မြို့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ASEAN+3 SONG CONTEST 2019 အဆိုပြိုင်ပွဲမှာ ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ သီချင်းလေးကို သီဆိုဖျော်ဖြေပြီးတော့ Second Runner-Up ဆုကို ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ အိမ့်ချစ်က ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် အနုပညာအလုပ်တွေကို...
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေကတည်းက ဆံနွယ်ရှည်ရှည်ရယ်၊ ချိုသာလွန်းတဲ့ အပြုံးလေးတွေရယ်နဲ့ ပရိသတ်တွေကို အချစ်ပိုစေခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောလေး ခိုင်နှင်းဝေကတော့ လက်ရှိမှာ အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ရင်း ပရဟိတ အလုပ်တွေလည်း အင်တိုက်အားတိုက် ပြုလုပ်နေသူတစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခိုင်နှင်းဝေပရဟိတလူငယ်များအသင်း ကိုလည်း တည်ထောင်ထားတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေကတော့ မိဘမဲ့ကလေးတွေကိုလည်း သူမရဲ့သားသမီးအရင်းတွေလို မွေးထားသူလေးပါ။ လတ်တလောမှာတော့ ခိုင်နှင်းဝေက သူမရဲ့ ပရဟိတအသင်းမှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို ဘောက်ဆူးပေးပြီး ပျော်စေခဲ့တဲ့အကြောင်း လူမှုကွန်ယက်မှာ ဝေမျှပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် အရမ်းကို ကြည်နူးဖို့ကောင်းတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေရဲ့အလှူလေးအကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ခိုင်နှင်းဝေကတော့ “တလတခါ လစာထုတ်ပေးတိုင်း ဝန်ထမ်းတွေအတွက် အပိုဘောက်ဆူးများပေးတဲ့ထုံးစံအတိုင်း ဒီလမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကလိုတယောက်ထဲကိုမရစေပဲ. ဗလာမပါကံစမ်းမဲများလုပ်ပြီး မဲဖောက်ပေးခဲ့ပါတယ်…ဒီလဝန်ထမ်းဘောက်ဆူးမှန်ပုံးစုစုပေါင်း — ၁၂၅,၆၀၀ရရှိပါတယ်…နည်းသည်များသည်မဟုတ်ပဲ ကျမဂေဟာရောက်တိုင်းလည်း ဝန်ထမ်းဘောက်ဆူးမှန်ပုံးလေးထဲကိုထည့်ပေးတယ်. ဂေဟာကိုလာတဲ့အလှူရှင်တွေကလည်းထည့်ပေးကြတဲ့အတွက်အခုလို ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တာပါ…ကျမရဲ့သားသမီးတွေအပေါ်စေတနာမေတ္တာတရားအပြည့်ဖြင့်ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့အတွက် ဝန်ထမ်းများအားလုံးကိုချစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်…ကလေးတို့ရဲ့မေမေ ခိုင်နှင်းဝေ” ဆိုပြီး သူမတတ်နိုင်တာလေးတွေနဲ့ ကလေးတွေကို ပျော်ရွှင်စေခဲ့တဲ့ အကြောင်းဖော်ပြပေးထားတာပါ။...
ပရိသတ်တွေချစ်ကြတဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင် က အဆိုပိုင်းမှာသာမက သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာပါ ထူးချွန်အောင်မြင်သူလေး ဖြစ်ပါတယ်။ စန္ဒီမြင့်လွင်က အခုဆိုရင် အိမ်ထောင်ကျပြီးလို့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်ကို မွေးဖွားထားတဲ့ မိခင်တစ်ဦးဖြစ်နေပါပြီ။ စန္ဒီမြင့်လွင်က ကလေးမေမေတစ်ယောက်ဖြစ်နေပေမယ့် မိသားစုအရေးကိစ္စတွေနဲ့အတူတူ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို မျှတစွာ လုပ်ကိုင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ စန္ဒီမြင့်လွင်က သူမကို ချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် သမီးလေး Treasure ရဲ့ ပစ္စည်းတွေကို မဲဖောက်ပေးမယ်ဆိုပြီး သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ အခုလိုပဲ ပြောပြထားပါတယ်။ “မေမေတွေနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်များအတွက် လက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေရမယ့်အခွင့်အရေး…သမီးရဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေအများကြီးရတဲ့ အခါတချို့ကလေးအမေတွေ နဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်ကို လက်ဆောင်ပြန်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မတတ်နိုင်သူတွေကိုလည်း ပေးဖြစ်ပါတယ်။” “ခုလဲထပ်ပြီး သမီးလေးသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေထဲက ဒိုက်ပါ ကလေးလှည်း wipes အင်္ကျိ၊ အ နှီး၊ ဘောင်းဘီတစ်ချို့ကို မဲနိူက်ပြီးလက်ဆောင်ပေးချင်ပါတယ်။ Post လေးကို like & share လုပ်ထားတာလေးကို screen...
ဂျင်းကောင်ဆိုရင် ပရိတ်သတ်ကြီးချစ်တဲ့ အနုပညာရှင် မြင့်မြတ်ကို မြင်ကြမှာပါနော်။ သူ့ရဲ့အနုပညာဟာ အံသြဖို့ကောင်းလောက်အောင်ကို စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ သရုပ်ဆောင် တစ်ဦးပါပဲ။ ဇတ်ရုပ်ကို ပီပြင်အောင် ကျရာနေရာကနေ တာဝန်ကျေတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်ဒမီဆုကိုလည်း ရရှိထားပြီး ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲက ထာဝရအနုပညာရှင်တစ်ဦးပါပဲ။ သူ့ရဲ့ဘဝမှာ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ဇနီးချောလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး သားချောလေးပါ ပိုင်ဆိုင်ထားပါသေးတယ်။ ဒီလိုအောင်မြင်ပြီး ပရိတ်သတ်အချစ်တော်ဖြစ်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင် မြင့်မြတ်ဟာ အလှူအတန်းမှာလည်း စံပြတစ်ဦးလိုပါပဲ။ မိသားစုလိုက် အလှူအတန်းတွေများစွာလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ အမြဲတမ်းလိုလို လှူတန်းဖြစ်နေတဲ့ မြင့်မြတ်တို့ မိသားစုဟာ အခုတစ်ခါလည်း သက်ကြီးလူရွှင်တော်တွေကို အလှူငွေတွေ လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ မိသားစုလေးဟာ ဘယ်လောက်ပဲ လှူတန်းနေပါစေ ဘယ်တော့မှာ ကြွားဝါတာမျိုးမရှိဘဲ ရိုးသားစွာ ကူညီထောက်ပံ့တာကြောင့် လူချစ်လူခင်လည်း ပေါများပါတယ်။ အခုလို သက်ကြီးလူရွှင်တော်အဖွဲ့ကိုလှူဒါန်းချိန်မှာလည်း မည်သူမျှ မသိအောင် ဒီအတိုင်း ရိုးရိုးလေးပဲ လှူဒါန်းခဲ့တာပါ။ ဒီလို...
လတ်တလော လူမှုကွန်ယက်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ လူငယ်အဆိုတော် အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Eternal Gosh အဖွဲ့ကတော့ လူငယ်ပရိသတ်တွေရဲ့အကြိုက်ကို ထိထိမိမိချပြနိုင်တာမို့ အောင်မြင်မှုတွေရရှိလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Eternal Gosh အဖွဲ့ရဲ့ အဆိုတော် ဟန်နေတာကလည်း သူ့ရဲ့အနုပညာ Talent ကြောင့်ရော ကြည့်ကောင်းတဲ့ ရုပ်ရည်ကြောင့်ပါ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေ သဲသဲလှုပ်ဝန်းရံနေကြတာပါ။ လတ်တလောမှာတော့ ဟန်နေတာက ဝေဖန်သံတွေ ဆူညံနေတဲ့ ဟိုတယ်အခန်းထဲက သူ့ရဲ့ပုံလေးတစ်ပုံအကြောင်း ထုတ်ရှင်းလိုက်တာ တွေ့ရပါတယ်။ အရှည်ကြီးမရှင်းပြပဲ တိုတိုနဲ့ထိထိမိမိ တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ ဟန်နေတာကတော့ တကယ့်ကို ပညာသားပါလှပါတယ်နော်။ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် အရမ်းကို ပညာသားပါတဲ့ ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကို ပရိသတ်တွေသိအောင် ထုတ်ပြောလိုက်တဲ့ အဆိုတော် ဟန်နေတာရဲ့အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ဟန်နေတာကတော့ အဆိုပါပုံလေးကို “ဒီနေ့ညနေ ၄း၀၀ မန္တလေး Central Point Shopping Centre မှာ Tuborg ကလုပ်တဲ့ Global...
စက်တင်ဘာ(၂၉) ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ သူမရဲ့ မွေးနေ့ကို အလှူအတန်းတွေ များစွာ ပြုလုပ်ရင်း ဖြတ်သန်းခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ ညပိုင်းမှာတော့ မိသားစုလေးနဲ့ Birthday Party လေးပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ သရုပ်ဆောင် ချောရတနာကတော့ မွေးနေ့မှာ သူမလှူချင်တဲ့ နေရာတွေမှာ လှူဒါန်းခွင့်ရလို့ ပျော်လို့နေပါတယ်။သူမလှူချင်တဲ့ နေရာတွေကိုလည်း မွေးနေ့မတိုင်ခင်ကတည်းက ဆက်တိုက်ဆိုသလို လှူဒါန်းခွင့်ရအောင် စီစဉ်ပေးတဲ့ ခင်ပွန်းကြောင့်လည်း ချောရတနာတစ်ယောက် ပီတိဖြစ်လို့နေပါတယ်။“မွေးနေ့မတိုင်ခင်ကိုတောက်လျှောက် ကိုယ်လှူချင်တာတွေသွားချင်တာတွေ အကုန်စီစဉ်ပေးခဲ့တယ် စပရိုက်မတိုက်တတ်တာမရိုတတ်တာလေးတစ်ခုပဲ ကျေးကျေးပါကျားကျား” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ စက်တင်ဘာ(၂၉) ရက်နေ့က ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ သူမမွေးနေ့မှာ လိုအပ်တွေနေရာတွေမှာ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့သလို ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံမှာလည်း သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါသေးတယ်။ချောရတနာကတော့ လက်ရှိမှာ မိသားစုကို အချိန်ပေးဖြစ်နေပြီး သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် gym ဆော့နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကိုအတွက်လည်း သိသိသာသာ ဝိတ်ချနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သလို သူမရဲ့ အခုလိုဝိတ်ချဖြစ်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်း...
ရခိုင်ပြည်နယ်က ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင် အဆောက်အုံတွေ အများအပြားရှိနေတဲ့ မြောက်ဦးမြို့ကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်းဝင်ဖြစ်လာဖို့ ယူနက်စ်ကိုအသိအမှတ်ပြုရေး အဆိုပြုလွှာမူကြမ်းကို စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့က တင်သွင်းလိုက်ပြီလို့ မြောက်ဦးရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်သန်းကပြောပါတယ်။ အဲ့ဒီအဆိုပြုလွှာမူကြမ်းမှာ သမိုင်းဝင်ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် အမျိုးအစားပေါင်း ၂၇ မျိုးကိုထည့်သွင်းရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပြီး နန်းတော်ကုန်း၊ တံတိုင်း၊ ကျုံး၊ ပိဋကတ်တိုက်၊ စဥ့်ထည်၊ စဥ့်ဖို၊ ညီလာခံသဘင်ကျင်းပခဲ့တဲ့နေရာတွေနဲ့ စပါးကျီတွေ စတဲ့အမွေအနှစ်တွေပါဝင်တယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။ဒီအဆိုပြုလွှာကို ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကနေ စတင်ပြုစုခဲ့တာဖြစ်ပြီး နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းပြုစုခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာ ဒေသမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့် အခက်အခဲတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ မြောက်ဦးယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်သန်းကပြောပါတယ်။” ယူနက်စကိုက လည်းဇန်နဝါရီလောက် နောက်ဆုံးထားပြီး မေးမှာတွေရှိတယ် သူတို့လိုအပ်တာတွေကိုအချိန်နဲတပြေးညီ ပြန်ဖြေရမှာပါ”လို့ ဒေါ်ခင်သန်းကပြောပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြောက်ဦးမြို့ဟာ ရှေးဟောင်းမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီး သမိုင်းဝင်အမွေအနှစ်တွေ အများပြားစုစည်းတည်ရှိနေတဲ့ ဒေသတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ အဲ့ဒီသမိုင်းဝင်အမွေအနှစ်တွေဟာ ထိန်းသိမ်းမှုအားနည်းပြီး၊ သဘာဝဘေး ဒဏ်တွေကြောင့်...
ခုနောက်ပိုင်းမှာ မော်ဒယ် ပိုင်တံခွန် ဟာဆိုရင် ပိုအောင်မြင်လာပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာသာမက ထိုင်နိုင်ငံမှာပါ ကြော်ငြာများ လက်ခံရိုက်ကူးနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်အနေနဲ့လည်း ဇာတ်လမ်းတွဲများနဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများစွာလည်း ရိုက်ဖို့ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ပိုင်တံခွန် ရဲ့ Video File လေးတစ်ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ မော်ဒယ်လ် ပိုင်တံခွန်က သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ သဲသဲလှုပ်အားပေးခြင်းခံထားရသူပါ။ လက်ရှိမှာ ပိုင်တံခွန်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ သာမက ထိုင်းနိုင်ငံမှ မိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့ တစ်ခဲနက်အားပေးခြင်းကို ခံထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ပိုင်တံခွန် က ပရိသတ်တွေ တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးတဲ့ မိန်းကလေးအသွင်အပြင် နဲ့ ထူးခြားနေတာကြောင့် ပရိသတ်တွေကြားမှာ နာမည်ကြီးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းကလေး အသွင်အပြင်နဲ့ ပိုင်တံခွန် ပရိသတ်တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးတဲ့ မိန်းကလေး အပြင်အဆင်နဲ့ ပိုင်တံခွန် ရဲ့ video file ပိုင်တံခွန် ရဲ့...